किसान आन्दोलनमा सर्बसाधारणको विचार , उहाहरुकै सामाजिक संजालबाट: – Narayani Dainik
किसान आन्दोलनमा सर्बसाधारणको विचार , उहाहरुकै सामाजिक संजालबाट:
सामाजिक संजालमा किसानहरुले गरेको आन्दोलनको समर्थन बढ्दो छ। किसानहरुले एक सरो लुगा लगाएर माइतीघर मण्डलामा गरेको आन्दोलन सामाजिक संजालमा देख्न सकिन्छ। यो सुन्य डिग्रीको जाडोमा एक सरो लुगा लगाएर भुक्तानी पाउने झिनो आशा सहितको कारुणिक दृश्य सरकारले अहिले सम्म देखेको छैन कि त देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरि राखेको छ ।
सुबास पण्डित :
‘साहुको जमिन भाडामा लिएर किसानले उखु लगाउँछ, दुःख गर्छ, पसिना बगाउँछ । उखु उद्योगले लैजान्छ । चिनी बनाउँछ बेच्छ र पैसा कमाउँछ । तर, उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई पैसा दिदैन । किसानको पसिनाले किनेको कालो सिसा भएको गाडी चढेर हिड्छ । विचरा किसानहरु काठमाण्डौं चिसो छिडिमा धरधरी रोएर बसिरहेका छन् । सडकमा सुतिरहेका छन् । बिलौना गरिरहेका छन् ।
ए नालायक सरकार, यी गरिव किसानहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने होइन ? अनि ति ठग, अपराधी लुटेराहरुलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारर्वाही गर्ने र क्षतिपूर्तीसहित उखुको रकम दिलाउनुपर्ने हैन । चर्का कुरा नगर्नु, ओठमा लगाउने चिल्लो छैन, ढोसा र पुवा ।’
सुर्य बराल :
‘जनताका समस्या नबुझ्ने सरकार माफियहरुद्वारा सञ्चालित हो भनेर बुझे हुन्छ अब जनताले । के कांग्रेस के कम्युनिष्ट नेपालमा शासन गरेका हरु सबै दलाल पूँजीवादका असली नोकर हुन । होइन भने जनताको आवाज सुन ।’
बिजय राज अधिकारी :
‘दलाल पुजिबाद को सबैभन्दा कट्टर आलोचक,सधैभरी मजदुर किसानको समर्थनमा बोल्ने एक बौद्धिक पात्र घनश्याम भुसाल यतिबेला कृषि मन्त्री छन, उनी दलाल पुजिबादकै लाइनमा र बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् कि छैनन् परिक्षा सुरु भएको छ ! सरकार चिनी किन्दा जनताले पैशा तिरेर किन्छन, उखुको पैशा अहिले सम्म यी गरिव किसानलाइ किन दिइएन,यी दुखिहरुलाई अन्याय गर्ने अपराधीलाइ छिट्टै कारवाही गरि,रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर !’
हामी किन अध्ययनका लागी प्रेरित छैनौँ ?
किन देखेन सरकारले किसान पिडा ?